Ukuba ufuna ukusebenzisa ipepile esulungekileyo kunye neqholiweyo ukongeza incasa ekutyeni kwakho, kwaye awunalo ixesha elininzi lokuyisila ngocoselelo, into elula, elula, yokugcina ixesha kunye nokusindisa abasebenzi kunokukunceda. .
I-Pepper grinder yimveliso yasekhitshini esetyenziselwa ukugaya ipepile, ityuwa yolwandle, iziqholo njalo njalo. Ke nazo zinokubizwa ngokuba sisinyithi setyuwa okanye ispice grinder. Amandla epepile esele igqityiwe yahlukile ngokugaya ngokwakho kwincasa kunye nokunambitha, abantu abaninzi bakhetha ukusebenzisa i-grinder ye-pepper.
Ifektri ngokuthe ngqo 100ml Banokubulawa Manual yesetyu nepepper Grinder
Iipilisi zepelepele zahlulwe zaziindidi ezimbini: ezokugaya iipepile kunye nezombane. Iigayo zokusila zepepile kwimarike zahlulwe zangumsebenzi onokuhlengahlengiswa kunye nokungaguquguquki.
Umenzi wePepper Grinder yeKofu yokuGaya iCeramic yokuGaya iCore
Iiceramic zokugaya ii-cores zenziwe ngezinto ezingaqhelekanga ezinje nge-alumina ezi-sintered kumaqondo obushushu angaphezulu kwe-1300 degrees Celsius. Iimpawu ezizodwa zezinto ezenziwayo zenza ukuba i-ceramic cores cores ibe neempawu zokuqina okuphezulu, ukunxiba ukumelana, ukusasaza ubushushu okukhawulezayo, ukuxhathisa umhlwa, ukhuseleko kunye nokukhuselwa kwendalo, ukugqibelela kwiziphene zeplastiki okanye iintsimbi zokugaya iintsimbi.
Ukushwankathela, ukugaya yinto yokusebenza kweyunithi eguqula izinto eziqinileyo zibe ziincinci ezincinci. E-China, okokuqala okusila bekungasetyenziswanga iinkozo kuphela kodwa bekusetyenziselwa izinto zonyango, kodwa ukutya ekutyeni bekuse "butyebile" kancinci. Yipelepele.
Ityuwa kunye nepepile ekuqaleni zazisetyenziswa kancinci kumakhitshi amaTshayina, kodwa ngoku amakhaya ale mihla nangakumbi aqala ukuyisebenzisa. Kodwa kulunge ngokwenene ukugaya ipepile, ityuwa kunye nepepile. Abantu baseNtshona baqwalasele ubunyulu. Abantu bakudala baseNtshona bacinga ukuba ngapha koko, balungiswa kwimizi-mveliso, kwaye izinto ezahlukeneyo zinokudityaniswa kuzo. Ke ngoko, ayimangalisi into yokuba kukho izinto ezininzi ezisilayo kwitafile yasekhitshini yendlu nganye.
Kwimakethi yokwenziwa kwamakhaya e-US enexabiso lentengiso ye-14 yezigidigidi, ngaphezulu kwe-90% isebenzisa umgubo wekofu ophambi komhlaba. Abantu abaninzi banemibuzo. Kutheni le nto kufuneka uthenge izinto zokugaya ikofu ukuba unokuthenga umgubo wekofu ngokuthe ngqo? Ukuba kunokwenzeka ukuba ube ne-grinder yekhofi ekhaya, ngokweenkcukacha-manani, kusenokwenzeka ukuba luhlobo lwesitshixo sekhofi. Iziphumo zale grinda zingcono kancinci kunaleyo yokutyumza ingxowa yeembotyi zekofu.
Isicoci seKofi esineSimbi engenasiphelo
Iqondo lokusila kwikofu liya kuchaphazela ngokuthe ngqo indawo yokudibana phakathi kwekofu kunye namanzi kunye nexesha lokukhupha ikofu.